सर्वोत्तम सिमेन्टले मासिक २० करोड राजश्व तिर्ने - सर्वोत्तम सिमेन्टले मासिक २० करोड राजश्व तिर्ने
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २१ माघ, 01:27:56 PM
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले मासिकरूपमा करीब रु. २० करोड राजश्व तिर्ने योजना बनाएको छ । यस अघि मासिक करीब रु. आठ करोड राजश्व तिर्दै आएको उद्योगले क्षमता विस्तारसँगै अब मासिक करीब रु. २० करोड तिर्ने योजना रहेको उद्योग सञ्चालन एवं सौरभ गु्रपका अगुवा शशी न्यौपानेले जानकारी दिए ।
करीब ३० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगले हालसम्म जग्गा खरीददेखि उद्योगको प्रविधि विस्तार र भौतिक पूर्वाधारसम्म करीब रु. १२ अर्ब बराबरको लगानी भएको उद्योगले बताएको छ । उद्योगले करीब रु. १५ अर्ब बराबरको सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
२०७५, २१ माघ, 01:27:56 PM
किन छोटी भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी बस्दैन ?
कृषियोग्य जमीनको करमा ८० प्रतिशत छुट, घर घडेरीको भने यथावत्